बर्त बसेर एक थोपा पानी नखाई भोक भोकै मन्दिर गएकी निलमको मन्दिर नपुग्दै गयो ज्या'-न (सबै सजक रहन सेयर गराै) - Public 24Khabar
Home News बर्त बसेर एक थोपा पानी नखाई भोक भोकै मन्दिर गएकी निलमको मन्दिर...
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दै उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दै पछिल्लो समयमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बिस्तार गरेका श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका सांसद समेत हुन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी गरेका उनले पछिल्लो समयमा बैंक, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि लगानी बिस्तार गरेका छन् ।श्रेष्ठ यसअघि निजी विद्यालयहरुको संघ प्याब्सन र हिसानमा अध्यक्ष समेत भएका थिए । त्यसैगरी संविधान सभामा सभासद समेत थिए ।
आइतबार प्राइम बैंकको सेयर मूल्य ५२९ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस आधारमा उमेश श्रेष्ठको नाममा रहेको सेयर हेर्दा प्राइम बैंकमा मात्रको उनको सम्पत्ति २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ हुन्छ । संस्थापक र साधारण सेयरको मूल्य फरक हुँदा रकम भने फरक पर्छ ।
तर २ अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति उमेश श्रेष्ठको प्राइम बैंकमा मात्र छ । वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी रकमको प्रतिफल उमेश श्रेष्ठले लगानी गरेका संस्थामा प्राइम बैंकबाट पाउने अवस्था छ ।
Previous articleपब्जी र फ्रीफायर बन्द गर्न सांसद विकको माग (सहि कि गलत ?)
Next articleआफ्नै घरमा जि’उदै भेटिए बिजय शाही, शिक्षक दिपक शाहीले किन गरे यस्तो हर्कत ? यो कस्को प्लान हो ?